Madaxweyne Xasan oo ku laabtay Muqdisho & wasiir Beyle oo warbixiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, isagoo ka soo laabtay safarro uu ku tegay dalalka Turkiga iyo Kenya.
Madaxweynaha ayaa magaalada Nairobi uga qeyb-galay shir madaxeedkii Guddiga Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika, kaas oo ku saabsanaa dardar-gelinta dagaalka ka dhanka ah argagaxisada qaaradda Afrika.
Madaxdii ka qeyb-galay shirka ayaa hoosta ka xarriiqay in loo baahan yahay inay dalalku yeeshaan iskaashi dhow iyo xog-wadaag ku saabsan la dagaallanka aragagaxisada iyo ka hor-tagga weerarrada ay kooxaha argagaxisada geystaan.
War-murtiyeed laga soo saaray shirka ayaa lagu sheegay in halista argagaxisada aan laga guuleysan karin haddii aanay jirin dadaallo midaysan oo dalalka qaaradda Afrika ay kula tacaalayaan mushkiladda.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in wafdiga Madaxweynaha ay socdaal ku tegeen dalka Turkiga, halkaasi oo ay kaga qeyb galeen xafladdii caleemo saarka ahayd ee loo sameeyay Madaxweynaha Dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, islamarkaana ay Soomaaliya u hayd guul.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in Wafdiga Madaxweynaha ay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaga qeyb galeen kulan looga hadlayay la dagaallanka argagixisada iyo sida wax looga qaban karo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa dalalka Turkiga iyo Kenya waxa uu kulamo gaar gaar ah la qaatay Madaxda labadaasi dal oo saaxiib dhaw la ah Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen xiriirka saaxiibtinimada iyo sida la isaga kaashan karo la dagaallanka argagixisada.